Warning: Declaration of DropDown_Nav_Menu::start_lvl(&$output, $depth) should be compatible with Walker_Nav_Menu::start_lvl(&$output, $depth = 0, $args = Array) in /customers/9/4/e/arlaadii.net/httpd.www/wp-content/themes/worldwide-v1-02/include/plugin/dropdown-menus.php on line 177 Warning: Declaration of DropDown_Nav_Menu::end_lvl(&$output, $depth) should be compatible with Walker_Nav_Menu::end_lvl(&$output, $depth = 0, $args = Array) in /customers/9/4/e/arlaadii.net/httpd.www/wp-content/themes/worldwide-v1-02/include/plugin/dropdown-menus.php on line 177 Warning: Declaration of DropDown_Nav_Menu::start_el(&$output, $item, $depth, $args) should be compatible with Walker_Nav_Menu::start_el(&$output, $item, $depth = 0, $args = Array, $id = 0) in /customers/9/4/e/arlaadii.net/httpd.www/wp-content/themes/worldwide-v1-02/include/plugin/dropdown-menus.php on line 177 Warning: Declaration of DropDown_Nav_Menu::end_el(&$output, $item, $depth) should be compatible with Walker_Nav_Menu::end_el(&$output, $item, $depth = 0, $args = Array) in /customers/9/4/e/arlaadii.net/httpd.www/wp-content/themes/worldwide-v1-02/include/plugin/dropdown-menus.php on line 177 wararka maanta-arlaadii.net » War yaa looga dacwoodaa dhurwaayadan sheegta siyaasiyiinta ee dhiigyo-cabyada ah ?‏
Waxan qormadan kaga hadli doonaa haddii uu Rabbi idmo cidda looga dacwoon karo dhurwaayadan sheegta siyaasiyiinta ee noqday dhiigyo-cabyada, Kuwaasi oo horay u soo baabi’iyey bulshadii Soomaaliyeed ee walaalaha ahayd, Taas oo ay isaga horkeeneen beel beel, deegaan deegaan, qoys qoys ilaa ay soo gaartay heer ay bulshadu iska ilaawdo iska ilaalintii cadowgeedii soo jireenka ahaa, ee aan marna ka nasanin sidii uu u baabi’in lahaa jirtitaankeeda iyo himilooyinka ay ku taameyso.
Inta aanan u galin cidda aan uga dacwoon karno dhurwaayadan dhiigyo-cabyada ah, aan bal marka hore tilmaamo dhibaatada ay ku hayaan Umadda Soomaaliyeed ee walaalaha ah. Walaalayaal sida aad ka warqataan dhurwaayadan sheegta Siyaasiyiinta, Waxa ay dhibaato ku wadeen bulsho-weynta Soomaaliyeed dhowr iyo labaatankii sano ee la soo dhaafay, Iyagoo isticmaalayey asaaliib kala duwan oo ay ku dhibaateynayaan Umaddeenna.
Tusaale ahaan, Waxa ay markii hore dumiyeen Qarankii Soomaaliyeed ee xogga badnaa, Iyagoo isticmaalayey hubkii ay Xabashida ka soo qaateen. Ka dibna, Waxa ay bilaabeen in ay iska horkeenaan beelihii Soomaaliyeed, Iyagoo abuurayo nacayb qabiil oo aan horay u jirin, Si ay u xoogeystaan colaadihii sokeeye ee ay iyagu abuureen. Ka dibna, Waxa ay bilaabeen in ay dadkii ka barakiciyaan dhulkooda, Iyagoo abuurayo colaado hor leh oo keeni kara in ay bulshadu ka xaqaan dhulkooda sida marar badanba dhacday.
Hadana waxaa ku xigtay in ay soo qaateen mashaariic diin la dagaalan ah, Iyagoo dhoofinayo cid alaale iyo ciddii ay ka muuqato sunno diineed sidii kal horeba dhacday. Markii ay Umaddu iska difaacday dulmigoodii, Islamarkaana ay gacmaha iska qabatay, ayey hadana waxa ay soo horkaceen cadowgii hubka u soo dhiibi jiray, Iyagoo ugu danbeyn dalka soo geliyey ku dhawaad 50 kun oo askari oo Itoobiyaan ah, Si ay mar kale u soo celiyaan isbaaradii ay caanka ku ahaayeen iyo waliba dagaaladii sokeeye ay hurin jireen.
Intaasi kuma aysan ekaanine, Hadana waxa ay la yimaadeen nidaamka loo yaqaanno federalism, kaasi oo ay ku doonayaan in ay ku abuuraan maamul beeleedyo qabiili ah, si loo wiiqo wadajirka Umadda Soomaaliyeed sida hadaba taagan. Maxaa lagu tilmaami karaa nimanka doonayo in ay hal magaalo yeelato labo maamul ? Maxaase lagu sifeyn karaa Adinkan idin weydiiyee nimanka ka shaqeynayo dhismaha maamul beeleedyo ku salaysan qabiil ? Goormuuse qabiil xaqiijiyey dhismaha qaran xooggan ?
Intaasi kuma aysan ekaanine, Dhurwaayadu waxa ay gacanta ka bixiyeen baddeenii ay ka buuxeen kheyraadka badan, Iyagoo saxiixay wax lagu sheegay is-afgarad balse aan u bixiyey khiyaano qaran, waayo ma jiro dunidan qof dhulkiisa muran gelinayo aan ka ahayn in uu khaa’inu-wadan yahay mooyaane. Dhurwaayadu intaasi kuma aysan ekaanin, hadana waxa ay dalka soo geliyeen labadii dowladood ee dhibatadanba sababta u ahaa, Kuwaas oo iska kaashaday burburkii ku yimid Qarankeenii xoogga badnaa.
Markii ay intaasi ku filnaan weydey Faashiliintan musuq maasuqa badan, oo ay arkeen in ay Umaddu wali nooshahay, Islamarkaana ay isku xiran tahay, ayey hadana bilaabeen in ay isugu diraan qabiil qabiil, deegaan deegaan, xisbi xisbi iyo qoys qoys si aan loo arag ceebahooda iyo waxtar-xumadooda, waana sababtaasi sababta ay u socdaan dagaaladan iyo khilaafyadan hareeyey meelo badan. Yaad u malayneysaa in ay hurinayaan colaadaha ka taagan gobolada Mudug iyo Hiiraan ? Yaadse u malayneysaa in ay ka danbeeyaan khilaafaadyadan hareeyey xisbiga UCID ? Yaa Kenya ku caawinayo boobka ay ku fikireyso ?
Markuu cadowgu arkay in wali uu nool yahay damiirka Umadda, Islamarkaana ay soo kici karto waqti kasto si ay u difaacato dhulkeeda iyo muqadasaadkeeda, ayey ku amreen adoomadooda dhurwaayada ah ee sheegta Siyaasiyiinta in ay huriyaan colaado sokeeye oo cusub iyo khilaafaad siyaasadeed, si Bulshada loo mashquuliyo, oo aysan u dareemin waxa socda sida dhul-boobka, bad-boodka, gaaleynta iyo waliba shiiceynta aadka u socota.
Markii ay ku fashilmeen dhurwaayadan dhiigya-cabyada ah ee Muqdisholand (federaalka) in ay qabtaan doorashooyinkii lagu balansanaa sanadka 2016, iyo arimihii ku lamaannaa doorashooyinkaasi, sida dhameystirka dastuurka iyo dhismaha maxkamad dastuuri ah. Markii ay ku fashilmeen la dagaalanka Xarakada Al-shabab, bal ay maanta Iyadu cayrsaneyso, Iyadoo ugu dabagalaysa meel kasta oo ay ku dhuuntaan Iyaga iyo waxmatarayaashooda Afrikaan ka ah ee u soo shaqo tagay dalkeena.
Markii ay ku fashilmeen (Somaliland) ictiraaf raadintoodii luugooyada ahayd, iyo qabashada doorashooyinkii laga sugaayey. Markii ay ku wareereen(Buntland) siyaasadda, Islamarkaan ay ku fashilmeen fulinta dhamaan balanqaadyadii ay sameeyeen, bal ay maanta bixin kari la’yihiin mushaaraadka askar-beeloodkooda. Markii ay ku fashilmeen (jubaland) in ay dhisaan gole wasiiro, Islamarkaana ay awoodi waayeey in ay Al-shabab ka fogeeyaan xaruntooda (kismaayo) iskaba daaye in ay ka saaraan gobolka Jubada Dhexe.
Markii ay ku guuldareysateen (Koonfur galbeed) dhisamaha baarlamaan oo ay ahayd markii horaba in isaga laga bilaabo, Islamarkaana ay awoodi waayey in Al-shabab ka fogeeyaan xaruntooda (Baydhaba) iskaba daaye in ay ka saaraan Shabeelada Hoose oo kale. Markii ay ka ku fashilmeen (Galmudug)in ay raacaan qaabka uu dastuurka u tilmaamayo dhismaha maamul goboleedyada, Islamarkaana ay awoodi waayey in ay mideeyaan gobolka Galgaduud oo ay beeshoodu (Hawiye )ku badan tahay.
Markii ay ku dhaceen waxaas oo fashil ah, ayey dhurwaayadu bilaabeen colaado cusub iyo khilaafaad siyaasadeed si ay u qariyaan ceebohooda iyo fashika ka haysta xagga hogaanka. Waana tab ay alaalaaba isticaalaan siyaasiyiinta dalalka, qaar gaar ahaan kuwa ka soo jeeda dalalka ay dadkoodu ka liitaan xagga dhaqaalaha, aqoonta iyo waliba wacyiga bulshada. Bal fiiriya xiliga ay arimahani ku soo beegmeen. Sow uma muuqdaan kuwa lagu qarinayo fashilka hogaaneed ee ka muuqada magaalooyinka Muqdisho, Hargeysa, Garoowe, Cadaado, Baydhaba iyo Kismaayo ?
Mar hadaanu soo sheegay dhibaatada ay naxariis-laawayaashani ku hayaan Umaddeena, Hadaba yaa looga dacwoon karaa dhibaatadooda ? Anigu waxa ay ila tahay in looga dacwoodo Alle, maxaa yeelay Isaga ayaa awood u leh in uu naga hor wareejiyo damiir-laawataashan ee aan xishoodka lahayn. Bal waxaan qabaa in lagu habaari karo salaadaha faralka ah, waayo waa ay mudan yihiin in sidaasi lagu sameeyo. Sow ma’ahayn Nabi Nuux kii habaaray Qowmkiisa markii ay dhibeen ? Sow ma’ahayn Nabigeena Kii habaaray kuwii laayey Asxaabtiisii uu u diray in ay dadka quraanka baraan ?
Gaba gabadii iyo gunaanadkii, Waxaan soo jeedinayaa talooyin dhowr oo aan is leeyahay waxa ay gacan ka geysan karaan sidii la isaga hor-wareejin lahaa dhiigya-cabyadan faashiliinta ah, Waxaana talooyinkaasi ka mid ah kawan soo socda :-
1-In la habaaro, bal la lacnado dhiigya-cabyadan meel kasta oo lagu arko, maadaama ay noo diideen inaan ku noolaanno nabad iyo nolol wanaagsan
2-In la joojiyo dhamaanta bixinta canshuuraadka baadda ah ee ay qaataan inta ay kala imaanayaan mashruuca ka duwan kan ay hadda wataan.
3-In la diido ka qeybgalka barnaamijyada been beenta ah ee ay lacagaha kaga qaataan shisheeyaha aan kala jecleyn jiritaanka Umaddeena.
4-In la qabto mudaahadaardyo waa weyn oo looga soo horjeedo faashiliinta beenta badan.
5-In dalka loo dhiibo Culimada Soomaaliyeed ilaa laga diyaariyo hanaan cusub oo dowladeed oo waliba loo wada dhan yahay.